Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya: al-Shabaab wax dhul ah kama talinayso 2015-ka. - Wargeyska Faafiye
Home 2014 September 19 .Warka Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya: al-Shabaab wax dhul ah kama talinayso 2015-ka.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya: al-Shabaab wax dhul ah kama talinayso 2015-ka.
September 19, 2014 · by	Liban Farah ·
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa ku dhaartay Arbacadii (17-kii September) in al-Shabaab laga saarayo meelaha ay wali ka taliso intaan la gaadhin sannadka dambe, siduu wariyay Radio Muqdisho oo ay dawladdu maamusho.
“Sannadka 2015-ka, kooxda argagixisada ah ee al-Shabaab gacanta kuma hayn doonto dhul Soomaaliya ku yaala,” ayuu yidhi Axmed, isaga oo la hadlaya jaaliyadda qurbo-joogta Soomaaliyeed ee London.
Axmed iyo wafdi heer wasiir ah ayaa u jooga London in ay ka qayb qaataan shir khuseeya dib-u-dhiska ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya.
“Waxaan aad ugu faraxsannahay in aan ka qayb qaadanno munaasabaddan ammaanka ee aad muhiimka u ah ee ka dhacaysa London oo tiigsanaysa in ay nabad iyo xasillooni ka dhaliso Soomaaliya,” ayuu yidhi Wasiirka Warfaafinta Mustafa Dhuxulow, oo Axmed u raacay London, sida uu sheegay Radio Bar-Kulan.
“Ingiriisku wuxuu noo yahay saaxiib aad u wanaagsan, sida aan ka aragnay heellanaantooda joogtada ah iyo kaalinteeda hoggaamineed ee Soomaaliya.”
Shirku wuxuu yimid xilli lagu guda jiro Hawlgalka Badweynta Hindiya, oo ah hawlgal ay wadajir u fulinayaan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya iyo Hawlgalka Midawga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) si al-Shabaab looga saaro meelaha ay awoodda ku leedahay ee koonfurta iyo badhtamaha Soomaaliya.
Xudur: Dagaal lix qof ku dhinteen.
Diyaaradii labaad oo la soo riday.